ikhaya » Okufumaneka » 2017: Thatha kwi-Old
2017: Thatha kwi-Old
Ngu-Allison O'Keefe Wright, oyiNtloko ngongameli we-Intelligent Strategic Strategy
KwiSicwangciso Sengqondo Evulekile Sinovuyo olukhulu lokusebenza kunye neemveliso zeendaba ezifana ne-ESPN, i-MTV, i-Food Network, i-Science Channel, i-MSNBC, iTraven Travel, iPlaneti yezilwanyana kunye ne-IFC (ukukhankanya kuphela abalingana bambalwa nje), kunye nekhosi yethu Uphando malunga nokuziphatha okubukeleyo, iimfuno kunye nokulindela sibona iipateni ezicacileyo ezikhulayo ezinokusinceda sibekwe ngomunwe kwiimpawu esizilindeleyo eziza kubandakanya ukusetyenziswa komxholo kunyaka (kunye neminyaka) ezayo.
Izolo nje ngeNqabana leNtshontsho namhlanje
Ngexesha langoku, akukho mfihlelo abantu abaninzi abavakalelwa ngayo badibana phantsi. Kuthetha nje, namhlanje akuzona zihlandlo ezilungileyo. Ubuninzi bezinto ezingenakukhunjulwa kwiindaba zeendaba ze-24 / 7 zikhuthaza ababukeli kumda wabo. Ihlabathi ligcwele iingxabano kunye nemibono yokujonga enye, ibeke eceleni. Kulo lonke ixesha, ithelevishini idlalele indima ekuncedeni abantu ukuba babaleke ngaphantsi kwezinto ezilungileyo, kwaye iyaqhubeka idlala indima ebantwini, kodwa enye into enomdla esiyibonayo ikhula njengoko abantu bezama ukuphepha ubumnyama "boqobo" Namhlanje, ubaleke ngokuzimela kulanga.
I-TV kunye ne-movie landscape ibhankelwe "yinto endala intsha kwakhona" umxholo iminyaka. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezinzulu zokuthi "i-nostalgia" ibamba iminqweno yababukeli beTV namhlanje, ngokuqinisekileyo iyaqhubeka ikhula ngokukhawuleza kwixesha elizayo. Ababukeli basebenzisa elidlulileyo kwi-antidote kweso sikho.
Iinkqubo ezintsha ezisebekhulile, nangona zingekho ezikude, amaxesha atyhola kakhulu kwizizathu ezininzi. Okokuqala, banikezela ukufumana izilungiso ezilungileyo kwizilingo zamhlanje, iimbandezelo, ezopolitiko namaziko. Okwesibini, basivumela ukuba siyiqonde kwaye sibamkele abalinganiswa "kwicala elingalunganga" kwemiba ethile, kuba bafumana "ukungazi kakuhle, ngoko". Okwesithathu, banikezela iqonga lamabali aphuka kumgangatho oqhelekileyo, ngaphandle kokuphula amanqatha namhlanje.
Abalingisi bexesha elidlulileyo banokwenza iimpazamo baze babambe imibono "ongenakuyenza" namhlanje. Abantu bavunyelwe ukuba bangaqinisekanga ukuba yiliphi icala eliza kuthabatha imiba engamaxesha anamhlanje ashoyo "abamnyama nabamhlophe". Unokwazi ukuba yiqhawe ngaphandle kokuba konke kuqikelelwe. Imigca yeembali inokubamba kwizinto ezibucayi ngendlela yokuhlola, ngaphandle kokuba umbukeli enyanzelekile ukuba abuze, okanye afune ukucaphuka, umgcini-nxaxheba ukuba kwaye xa bekhetha "icala elingalunganga" okanye ukuba baqinisekanga ukuba bangayiphi indlela eya kuyo.
Izinto angamazi,Oku Siyiyo, Amerika, i-Red Oaks, iWestworld - Ixesha elidlulileyo libonisa ubuso balo kwiindlela ezahlukeneyo ezandisayo. Imiboniso efana nale ivumela ukuphunyuka okwesikhashana kwi-2017 ukuya kwiindawo ezahlukeneyo, kwezinye iimeko ziyazi kakuhle, zikhululekile kwaye zilula. La mabali asetshenziswe kwixesha elidlulileyo asivumela ukuba sibone iinto ezintsha ezenzekayo ngathi xa sibona imiba nge-naïve, okanye ubuncinane abanamava, amehlo. Ukongezelela, ixesha elidlulileyo lingaba yinto emnandi emva kwezinto ezinzulu okanye izinto ezinzulu - iingoma kunye neengubo ze-80s zinika ubuchule kwimiba enzulu. Ngelixa izicwangciso zininzi zizalisekisa kwaye zazise ibali, zingaba nesizathu esiluhlukileyo sokubukela - ifestile kumntwana womzali womntu okanye ukubuyela kumntu.
Njengokwandiswa kwalolu hlobo kumasethingi angabonakaliyo, abathengi abancinci - ikakhulukazi abathengi abesilisa abancinci - bayaqhubeka bexela umxholo ovuselela umqondo olahlekileyo xa iMillennials ifika iminyaka yobudala - Abesilisa kwindima yabalinganiswa abanamandla.
I-Millennials yayiyi-"Alpha Girl Generation." Njengoko beza bebudala, uluntu lwabamantombazana abancinci njengabaholi - bezama ukunqoba ukucinezelwa kwezizukulwana zangaphambili - kwaye ngenxa yoko amantombazana kwisizukulwana seMillennial aqala ukukhangela abafana Ukuzithemba, ukuqhuba nokuphumelela kwezemfundo. Kwimidiya, ama-heroine aseMillennial afana noJuno, uHannah Montana, uRachel Berry noKatniss Everdeen batshela amantombazana ukuba athathe inkokhelo, ukuba athathe. Ngelo xesha, amaqhawe angamadoda, njengabasebenzi baseJackass, axelele ukuba abantu bepholile ukuba bangazami - ukufumana isityebi ukugibela i-skateboard yakho ibe yimpahla, kwaye ngokuqinisekileyo ufumana udumo oludumiweyo lwe-skateboard, yindlela engcono.
Uphononongo olutshanje lwePew lubonise ukuba2 kwi-5 18- kumadoda ase-31 ubudalakwaye1 kwi-5 25- kumadoda ase-34 ubudalaBasaphila kumakhaya abo abazali, xa kuthelekiswa ne-1 kuphela kwi-3 kunye ne-1 kuma-10 amabhinqa kule minyaka yobudala. Ucinga ukuba ngubani ongafanelekanga ngalokhu? Gen Z guys. Esi sizukulwana esilandelayo samadoda amancinci akholelwa ukuba amantombazana alingana nabo - ahlonela amabhinqa anamandla kwaye aqikelele ikusasa apho aya kufumana iqabane labesifazane abaza kuncedisa ngokulinganayo kwimpumelelo yabo. Sekunjalo, njengokuba amadoda angamaGen azama ukuhlaziya ubukhulu besilisa, kungekhona kwindlela yamadoda, kodwa "abafana bayalingana" uhlobo lwenkqubo, balambile abalingana abancinci abancinci abonisa ukuba kulungile ukuba abantu baqine baze bahlakaniphe , Njengamantombazana. Bafuna iimpawu zengqondo ezidalwa ngabantu abazibandakanya kunye kunye nekhadi labo lomntu. Ngamanye amaxesha kulula ukufumana aba balimi kwimixholo ebekwe ngaphambili - ngaphambi kokuba amantombazana aseMillennial afake amakhwenkwe ukuba abe "kwindawo ye-beta" - kodwa ingaba isetyenziswe namhlanje okanye ngaphambili, kukho indlala yecala elikhuselekileyo elinamandla, kwaye silindela ukuba umxholo Ohambisa le mizekelo iya kuxhuma.
Iimfazwe zangempela ezifunekayo-Inyathelo ngaphandle, i-Anti-Hero
Ukongezelela ekukhangekeni abalinganiswa besilisa abangavuselela ukholo olunjalo kwisini, i-TV landscape ivela kwi-heroy anti-hero. Phantse kwiminyaka eyishumi eyadlulayo, ababukeli bafumene begula ngenxa yezinto ezinokuthi zithembeke kwaye zatshatyalaliswa kakhulu. Baqala ukunqwenela amabali apho i-underdog, nokuba wayenendlela ezininzi "umntu omubi" uya kuphumelela loo mini. Ukuphuka kobubi bukaWalter White kwakukulo mbandela, kodwa amanqaku eminye imiboniso isondeza imfuno efanayo: Igazi leNyaniso, iDexter, Ukuhamba Efile, iNdlu yeeKhadi, uMdlalo weZihlalo zobukhosi ukubiza nje ezimbalwa. Emva kwemidlalo yokulwa neqhawe elininzi kakhulu, i-pendulum iqala ukuguqula kwakhona.
Njengoko kubhekiswe kwindlela yokunyuka, siphila kwihlabathi eliqhubekayo kwixesha elinzima kakhulu, kodwa ingxaki kukuba amaninzi anxamnye ne-heros ngoku abonisa ngokunyanisekileyo ngokunjalo. Kwabaninzi "ababi" bawubamba loo mini. Ngaloo ndlela, ababukeli babonisa umnqweno okhulayo lomxholo obonisa ukuba kunokwenzeka ukuba kakuhle ukulawula ukunqoba. Iindaba zokuphefumlelwa kunye nethemba esinceda sikholwe ukuba kukho abantu abasehlabathini abanobakhathalelayo nabakhangele abanye, bayafuneka ngokugqithiseleyo.
Ukufa kwe-Surfing - Ukhokelo oluCwangcisiweyo kunye noTonwabo oluQinisekisiweyo
Kwimiba engakumbi yendlela yokutshintsha kwemizila yeendaba, njengoko ubomi buninzi buxhomekeke kwi-intanethi nakwiindlela zokukhetha, iindlela iindlela ababukeli bafumana ngayo umxholo omtsha ukuhlangabezana neemfuno zabo eziguqukayo. "Ukushenxiswa kwesiteshi" kunye nokuphanga isikhokelo senkqubo yokukhubeka kwigolide ye-impromptu iya kuba yiminyaka engapheliyo - oku akufumani oko bafuna ngokukhawuleza. Usesho olukhokelekileyo lwesihloko kunye nesitayela alukho
Kuphela ukufumana ukuthandwa, kuya kuba lindelo, ngakumbi kubantu abadala. Abaninzi ababukeli beTV basitshela ukuba ukuxhatshazwa "ngumzabalazo" wokuhamba ngeTV yeNdabuko, baninzi bafuna ukuqala uphando lwabo kwiiNethwekhi ze-OnDemand zeNethiwekhi, kunokuba iseshini ngokwaso okanye isikhokelo senkqubo, ngeenjongo zokufikelela zabo Umxholo onqwenelayo.
Usesho olukhokelwayo kunye nesithethe "sakho" somxholo onikezelwa ngamaphulo asasazo njenge-Netflix, isiqinisekiso sokuthi ababukeli baya kufumana into evuyayo ukubukela, ukunikezela ngokubuyisela okunokuthenjelwa ngexesha elichithwe. Ku-2017, ababukeli bafuna iingcomo zinikwe zona, kwaye esikhundleni salo, ubuncinci bafuna ukubonisa izihloko, imifanekiso kunye neenkcazo zenkcazo ecacileyo kunye nefuthe ekubanjeni ingqalelo yabo kwaye zinikeze iinkcukacha "ezilungele zona".
Kwaye ukhuphiswano ekucaciseni ukuba "kubo" luya ngokunyuka, njengoko kungekhona nje izihloko ezintsha ezikhuphisana nazo. Kunoko, ngokulindela phezulu kunanini na, nangona bafuna nje ingxolo engummangaliso, ababukeli abafuni ukubuyela kumboniso omtsha ukuba bakhonze njengokwemva kwi-multi-tasking (imfuno enokuzaliswa ngokuya kwi-unscripted Uchungechunge) kwaye endaweni yoko baqhubeka bejika kwiintandokazi zengxowankulu endaweni. Ubomi obuthathaka kuthetha ukuba abathengi bafuna ukwenza uninzi lwexesha labo leTV, kwaye bafuna Lonwabo, Kunokuchitha ixesha lokungena kunye nokuthatha umngcipheko kumboniso omtsha okanye nayiphi na into ekhoyo "iphile". Xa badinga ukuphunyuka okuthenjisiweyo kunye nokuhleka okuqinisekileyo okufutshane, ukusabalalisa iziqephu zokuzithandayo zama-Friends, Scrubs okanye Freaks neeGeek ngokuqhelekileyo zikhethiweyo ezifutshane. Awudingi ukunyamekela ingqalelo kuba sele uyibonile, kodwa ungathemba ukuba iya kuba ngumsindo oqhelekileyo kunye nobungane kwaye udibanise uxinzelelo lolo suku.
Okwangoku, ngeendlela ezininzi into entsha indala ... kwaye bhetele wenze kube lula ukuyifumana.
Malunga Umbhali:Allison O'Keefe Wright
Njengomlawuli oyiNtloko kaMongameli, uMlawuli oLawulayo, uPhando kunye neSicwangciso Cwangciso soMqondo ovulekileyo, U-Allison ubonisana neemveliso ezinkulu kwiziko, ukuphuhliswa kwemveliso kunye nokuthengisa. U-Allison ufumene ukuqonda jikelele kwiinkcukacha zakhe kwiimarike zeminyaka eminyaka. Wayebhala incwadi ethi D_Code 5, uphando lweenkcubeko zolutsha olujikelezayo emhlabeni wonke, kwaye yaqhubela phambili uphando kunye nokucwangciswa kwamacandelo kwi-MTV kunye ne-EMI (Capitol) Music, apho abasebenzisi abancinane, inzondelelo kunye nefandom bezona zinto zijoliswe kuzo. Ngoku ukhulisa ugxininiso olulandelayo olutsha olutsha, uGen Z, kwaye usebenze kunye nemigangatho efana ne-MTV, iHeHeart kunye ne-ESPN ekuhlakuleleni ukuqonda okunzulu kwesi sizukulwana. U-Allison unamandla okhethekileyo okuhlaziywa kwedatha, kwaye ukholelwa ukuba umculi uyisisombululo esisisiseko sokwenza inyaniso kubathengi nokukhuthaza abaxhasi kunye nabalingane ukuba banandiphe ukuqonda nokuqonda.
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba Sprockit ITeknoloji yeTV	2017-05-08
Previous: I-9-1-1 Iiprojekthi zeKomiti yangaphakathi
next: I-FM RADIO BROADCAST CONTRACT ENGINEER
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "2017: Bring on Old". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/2017-bring-on-the-old/. Enkosi.